सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै, एमसीसी टेबल गर्ने सन्दर्भमा निर्णय आउने — Sanchar Kendra
१संसद बैठक रोकेर सभामुखसँग परामर्श
२अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो
३कञ्चनपुरमा विद्यालयको छतमा सुतेका धामी मृत फेला
४दाइजोको निहुँमा पत्नी हत्या गरेर फरार युवक ४ वर्षपछि पक्राउ
५अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बिदामा
६अर्थमन्त्रीबारे संसदीय छानविन समिति बनाउन माओवादी तयार !
७बजेटमा उठेका विषयबारे एमालेसँग छलफल गर्ने माओवादीको निर्णय
८कस्तो रहनेछ आजको मौसम ?
९खुमलटारमा माओवादी पूर्व स्थायी समिति बैठक जारी, पदाधिकारी टुंगो लगाउन कसरत
१०नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
११सकियो नेपाली काँग्रेस पदाधिकारी बैठक, के-के विषयमा भयाे छलफल ?
१२एकैदिन ९० जनामा देखियाे कोरोनाकाे संक्रमण
सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै, एमसीसी टेबल गर्ने सन्दर्भमा निर्णय आउने
काठमाडौँ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) टेबल गर्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनको आज पनि बस्दै छ ।
विहान १० बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल हुने छ । विहीबार साँझ बसेको गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीबारे सहमति हुन नसकेपछि आज पुनः बैठक बस्न लागेको हो ।
आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी राखिएको छ ।
गठबन्धनमा सहमति भएपछि आजै बस्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले एमसीसी टेबल गर्ने एजेण्डा तय गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले बताए ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्ने पक्षमा उभिएको छ भने प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा संसदमा टेबल गर्न समेत मानिरहेका छैनन् ।
बिहीबारको गठबन्धनमा बैठकमा उनीहरुले एमसीसीबारे आ आफ्नो अडानमा उभिएपछि सहमति हुन सकेन । यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए ।
राति ८:५० मा बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच १० : १५ सम्म छलफल भएको थियो । उनीहरुबीच भएको छलफल दुबै पक्षले खुलाउन नचाहेको अवस्था छ । आज बस्ने गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँगको भेटवार्ताको बिफ्रिङ पनि गर्ने बुझिएको छ ।